bishan 12 keeda ay ku egtahay qabashada araajida dadka u tartamayaasha jagada gudoomiyenimada baarlamaanka
Col. Barre Hirale oo Col. C/Laahi Yusuuf ku eedeeyey in uu gacan Siinayo Gen. Morgan
Kulankii baarlamaanka ee maanta ee looga hadlay in la dardargaliyo doorashada baarlamaanka iyo madaxweynahaba.
Guddigii xeer hoosaadka ayaa maanta kulankii baarlamaanka soo hor dhigay dhowr qodob uu ka mid xeer hoosaadka baarlamaanka KMG ah,waxaana ka mid ahaa in la dardargaliyo diyaarinta doorashada gudoomiyaha,in la bilaabo qabashada araa'jida u tartamayaasha jagada gudoomiyenimo ee baarlamaanka KMG ah mudada shanta sano ah ee soo socota iyo in aysan dhaafin doorashada Ra'iisul baarlamaanka shan iyo tobanka bishan, baarlamaankana ay sidaas ku ansaxiyeen.
sidoo kale in ay soo gudbiyaan u tartamayaasha jagada madaxweyah Dowlada KMG ah ee soomaaliya magacyadooda kuna soo wada xaadiraan dalka si loo diiwaan galiyo.
Prof.Maxamad Cumar Dalxa oo ka mid ah guddigaas ayaa ii sheegay in bishan 12 keeda ay ku egtahay qabashada araajida dadka u tartamayaasha jagada gudoomiyenimada baarlamaanka,iyadoo ay maantana bilaaban doonto qabashada araajida,walina aysan helin wax soo gudbiyay.
Kulanka baarlamaanka waxaa markii ugu horeysay laga furay Bomas Of Kenya,balse hadda waxaa ka socdaa halkii uu ka socon jiray shirka ee Mbagathi.kadib markii ergo badan oo halkaaasi daganayd laga saaray,iyadoo qaarkood loo celiyay magaalada mogadisho loogana sii gudbin doono goboladii ay ka yimaadeen qaarkood,halka kuwo kalena ku sugan yihiin hotelada deegaanada islii,qaar ka mid ah ayaa muujinaya cabashooyin iyagoo eedayn usoo jeedinaya guddiga shirka ee IGAD in ay ku xadgudbeen liisaskoodi sidaasna looga saaray xubinadamada baarlmaanka.
Col. Barre Adan Shire Hirale oo ah guddoomiyaha isbahaysiga dooxada Jubba ayaa ku eedeeyey Puntland in ay taageero siinayaan Gen. Moorgan.
"Dhammaan ciidamadaiisa (morgan) waxaa laga soo diray Puntland, kuwaas oo uu ansixiyey Col. C/Laahi Yuusuf Axmed [hogaamiyaha Puntland", sidaas waxaa yiri Barre Hiiraale oo u waramayey hay'ada Qaramada Midoobey wararka uga soo tebisa Koonfurta Soomaaliya. Barre Hiraale waxa uu sheegay in Ciidamada Gen. Moorgan ay kusugan yihiin Bu'aale oo 210 km u jirta Kismaayo, kuwaas oo ka kooban '500-600 oo maleesiyo ah oo wata 31 gaawaarida dagaalka ee loo yaqaan tegnikada' ayuu yiri Berre Hiitraale.
Shegashadaas Barre Hiiraale waxaa beeniyey afhayeen u hadlayeye Puntland, 'haddii aan nahay Puntland wax lug ah kuma lihin in carqaladeyta gobol'na" sidaas waxa yiri Awad Ashara.
IRIN waxa ay sheegtay in laga cabsi qabo in weerarkaasi uu wiiqo baarlamaanka dhowaanta lagu doortay kenya, baarlamaanka oo hadda guddoomiye kumeel gaar ah u doortay Hirsi Bulxan Faarax, oo 83-jir ah. Baarlamaaanka oo lagu wado in uu madaxweyne soo doorto bishan September 22-keeda.
Dhanka kale Bethel Kiplagat (kenya) waxa uu sheegay in ugu dambaynta maxkamad lasoo taagi doono Gen Muhammad Sa'id Hersi "Morgan" haddii uu weerar ku qaado dekeda Kismaayo.,
ISHA: Guji halkan...
Xaaladda Magaalada Kismaayo
Warar ay werisey hay'adda wararka ee Reuters ayaa sheegay in xaalada magaalada Kismaayo ay kacsan tahay. Waxaa warku intaas ku daray in 1,200 maleysiyo ah iyo 32 gaari oo ku hubaysan hubka culus oo uu wato General Maxamed Siciid Xirsi Morgan in ay ku siqayaan magaalada dekeda ah ee Kismaayo ayagoo ka imanaya dhanka gobolka Gedo. Waxa arintaas ka jawaabey boqolaal ka soo hor jeeda oo difaac ka galay bannaanka magaalada.
Luuq Garba Haarey 69 km
Garba Haarey Baardheere 129 km
Baardheere Baydhaba 195 km
Baardheere Jilib 260 km
Jilib Kismaayo 114 km
Kismaayo Afmadow 139 km
Kismaayo Dhoobley 195 km
ISHA: khariidada uu qoray Maxamed Abshir Cali.
"Xaaladda magaaladu aad ayey u kacsanayd saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey, kaddib markii maleysayadii magaalada joogtey ay bannaanka magaalada uga baxeen si ay u difaacaan magaalada" sidaas waxaa yiri Hussein Timojilic oo u waramayey weriyayaal sida ay werisey Reuters.
Magaalada Kismaayo waxay 500km koonfur ka xigtaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho, waana deked ganacsi.
Moorgan waxa uu magaalada Kismaayo qabsaday Sannadkii 2001, laakiin maalmo gudohood waxaa dib uga saaray isbahaysiga Dooxada Jubba, kuwaas oo markii hore Moorgan magaaladaas ka saaray sannadkii 1999 kaddib markii uu halkaas ka talinayey lix sano.
Warkaas waxaa hay'ada wararka ee Reuters siiyey Mohamed Ali Bile, cinwaanka warkaasina waxa uu ahaa:
Tension rises around southern Somali port
Sida ay werisey BBC-da qaybta afka Ingiriisiga ee UK, ugu yaraan 50 gaari oo ah kuwa gaashamaan oo ah ciidamada Morgan ayaa la sheegay in ay joogaan meel u dhow Kismaayo. Waxaa warku intaas ku daray in Isbahaysiga Dooxada Juba ay difaac ku jiraan isla markaasna uu halkaas Axadii shalay iska hor imaad u dhexeeya labadaas qaybood uu ku dhexmay aagaas. EEG Militia advances on Somali port
Wixii kusoo kordha wararkaas: Ha eeg halakan.... GUJI